Codsiga Parkomat wuxuu ka bilaabay Mersin | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean33 MersinCodsiga Parkomat wuxuu ka bilaabmay Mersin
26 / 02 / 2020 33 Mersin, Coast Mediterranean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Codsiga Parkomat wuxuu ka bilaabay Mersin
Codsiga Parkomat, kaas oo Duqa Magaalada Mersin ee Magaaladda Vahap Seçer uu qorsheynayo inuu hirgaliyo si looga hortago dhibaatooyinka ay muwaadiniintu kala kulmaan helitaanka meelaha ay ku sugan yihiin taraafikada iyo si ay si deggan ugu neefsadaan xirfadaha, ayaa bilaabmay. 92 shaqaale ah, oo loo shaqaaleysiiyay dalabka, kuwaas oo ka caawiyay ganacsatada inay raad raacaan gawaarida ku haray jidadka iyo lugeyda muddo dheer, waxay qaateen tababaro lama huraan ah waxayna billaabeen howlahooda.
Lagu dabaqay qaybaha muhiimka ah ee magaalada
Codsiga Parkomat, oo ay si wada jir ah u ansixiyeen Golaha Deegaanka Magaalada, ayaa la bilaabay si loo baabi'iyo dhibaatada cufnaanta taraafikada ee Mersin iyo dhibaatada helitaanka baarkinka. Shaqaalaha la shaqaalaysiiyay waxay shaqadooda ka bilaabeen wadooyinka, jidadka iyo meelaha taraafikada ay aad u kacsan yihiin kadib tababarkii ay ku qaateen Xarunta Koongareeska iyo Bandhigga. Ayadoo ahmiyada ay leedahay in Madaxweyne Vahap Seçer uu meeleeyo shaqada haweenka, wadar ahaan 27 shaqaale, oo 92 ka mid ah ay haween yihiin, ayaa adeegsiga nidaamka Parkomat ka dhiganaya meelo kala duwan oo magaalada ah.
15 daqiiqo ee ugu horeysa oo bilaash ah
Shaqaaluhu waxay ka helaan risiidhada wata taarikada laysanka, waqtiga baarkinka iyo koodhka madbacadda aaladda ay adeegsadaan waxayna gaadhiga u gudbiyaan wadayaasha baarkinka. Codsiga, halka 15ka daqiiqo ee ugu horreysa ay bilaash yihiin, 15 TL inta u dhexeysa 60-4 daqiiqo iyo 15 TL inta u dhexeysa 120-7 daqiiqo ayaa la go'aamiyaa. Lacagta ugu badan waxay noqon doontaa 24 TL haddii gaariga laga tago 20 saac. Muwaadiniintu sidoo kale waxay awood u yeelan doonaan inay ku bixiyaan kaarka amaahda arjiga, oo la bixiyo 08 maalmood inta u dhexeysa 00:18 iyo 00:6, Isniinta-Sabtida.
Fatma Özcan: “Dumarku meelkastoo ay joogaan duurka”
Isagoo caddeeyay inuu u adeegsan doono midabtakoor wanaagsan dumarka tan iyo maalintii uu xafiiska qabtay, Madaxweyne Seçer wuxuu u weeciyay dhanka jahada haweenka shaqa qorista. Shaqooyin badan oo loo arko "shaqo lab", haweenku hadda waxay leeyihiin fikrad. Isagoo caddeeyay inay muddo dheer shaqo la’aan ahayd, Fatma Özcan waxay ka mid tahay haweenka loo soo kireeyay Parkomat. Isagoo caddeeyay inuu aad ugu faraxsan yahay fursadda la siiyay, ayuu yiri canzcan, “Codsi ayaan ka sameeyay bogga 'bogga' URKUR. Way i soo wici jireen, kadib markii aan wareysi la yeelanay, taleefanka ayaa yimid oo waxaa loo sheegay in la shaqaaleysiiyay. Kadib waxaan helnay tababar ku saabsan shaqada. Waxaan helnay tababar ku saabsan waxa ay tahay, faa'iidooyinka nidaamka Parkomat. Waxaan helnay tababar qalabkeena. Kadib waxaan bilownay howlaheena. Waxaan ku jiraa aagga gole. Nidaamka loo yaqaan 'Parkomat system' waxaa lagu xushay meelaha taraafikadu ku badan yihiin, taraafikada ayaa laga naafeeyay arrintan. Waxaan u shaqeynaa saacad-socod. Waan jareynaa jabka, waxay bixiyaan lacag la awoodi karo. Haweenku hadda waxay ku jiraan duurka, meel kasta, waxayna ka helaan jawaab celin aad u wanaagsan dadka iyo dadkeenaba. Is-aaminiddu way korodhaa marka haweenku cagahooda isku taagaan. Aad iyo aad baad ugu mahadsantahay Duqa Magaaladeena Vahap Seçer sidaad mudnaanta noo siisay haweenka. Aad ayaan ugu farxi lahayn haddii mashruucyada ku saabsan haweenka ay sii socdaan. Waxaan sidoo kale kaaga mahadcelinayaa kalsoonida aad na siisay waxaanan rajeynayaa sii wadida mashaaricda.
Helin Uçansu: “Waa shaqo loo yaqaan shaqada ragga, laakiin annaguba dumar ahaan waannu samayn karnaa”
Helin Uçansu, oo 24 jir ah iyo hooyo cunug dhashay, waxay tidhi:
Waxaan shaqo la'aa afar ama shan sano. Ma aanan helin shaqo. Waxaan arkay shaqada dhajinta barta internetka, waan dalbaday. Waxay bixiyeen macluumaad ku saabsan sida aan ula macaamilayno muwaadiniinta waxbarashada, sida aan u isticmaalno aaladda iyo khidmadaha. Gobolka aan ka shaqeeyo waxaana jira dad ka taga aaggan maalmo iyo bilo. Muwaadiniintu aad ayey ugu faraxsan yihiin inay dhahaan 'waad ka hortagtay', ganacsataduna aad bay ugu faraxsan yihiin arrintan. Dadbadan oo muwaadiniinteena ah ayaa ku qanacsan xaaladdan. Shaqada waa shaqo bukaan-socod oo loo yaqaan 'shaqada lab', laakiin annaguna haweenku sidaas ayaynu ka qaban karnaa. Madaxweynaheena Vahap ayaa sidoo kale arkay. Mudnaan ayuu ina siiyay maxaa yeelay wuu arkay. Aad ayaan ugu faraxsanahay uguna guuleysanay arintan. ”
Öztürk: "Muwaadiniintu waxay jeclaan lahaayeen inay u mahadceliyaan Duqa Magaalada Vahap Seçer"
Hüseyin Öztürk, oo ka mid ah shaqaalaha shirkadda Parkomat, ayaa sheegay in dalabka uu aad ugu wanaagsan yahay marka loo eego muwaadiniinta iyo ganacsatada taasina ay yareynayso taraafikada, “Muddo sanad ah ayaan shaqo la'aa. Waxay ahayd codsi aad u wanaagsan. Muwaadiniintu waxay jeclaan lahaayeen inay u mahadceliyaan Duqa Magaalada Vahap Seçer oo ay salaanta ka qaadaan. Waxaan ka soo gudbiyay halkan. Waxay caado wanaagsan u ahayd ganacsatada iyo muwaadiniinta. Shaqo ayaa la siiyay. Aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin Duqa Magaaladeena Vahap Seçer. ”
Gaadiidka dadweynaha ee Istanbul ayaa maanta bilaabmay
Codsiga Kaararka TCDDde ee la bilaabay (Sawir Sawir)
Codsiga tigidhka yar yar ee laga soo bilaabo Istanbul
Meeqaa codsigayga baska ee Gaziantep?
Hirgalinta Hirgalinta waxaa laga bilaabay Mashruuca Batıkent
Codsiga Joogitaanka Smart wuxuu ka bilaabmaa Muugla
Waqtiga kaydka qoraxda ee basaska laga bilaabo Sakarya
Codsiga Trambus Pink laga bilaabo Malatya